Tan-dalàna, tsara tantana ? | NewsMada
Tan-dalàna, tsara tantana ?
Hatramin’izao, samy mbola manao fanamarihana, miantso, mitaky mihitsy aza, ny tokony hampiharana ny atao hoe «fitondrana tsara tantana» eto amin’ny firenena ireo mpamatsy vola vahiny. Ireo tompony na mpampindram-bola hanaovana ny fampandrosoana izany. Tato ho ato, toa ohatran’ny nisesisesy izany. Efa niteny, ohatra, ny amerikanina, ny Vondrona eoropeanina. Efa nanamarika koa ny Firenena mikambana, ny banky iraisam-pirenena, ary farany teo, ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI).
Somary alefadefahany izay ny fomba fiteniny. Fomba fiteny diplaomatika e ! Rehefa tena fakafakaina anefa, tena fanakianana tsotra izao no ataony. Indraindray aza mavaivay mihitsy, ka mampieritreritra, mampametra-panontaniana : fitiavana te hitsikera sa fampifilafilana ? Sarotra ny hamaly izany eto. Ny azo antoka, tsy miteniteny foana ireo fa mahita lesoka, mahatsikaritra tsy fahatanterahana amin’ireo fepetra takiany, mialoha ny tena hanatobahany ny vola hanaovana ny fampandrosoana eto amin’ny firenena.
Santionany, sady ny lehibe indrindra amin’izany fepetran’ny fanjakana tsara tantana izany, ohatra, ny fahamafisana orin’ny Andrimpanjakana. Efa mijoro ara-dalàna avokoa ve ? Samy manao ny andraikiny (ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna), sa mifampitsabaka, mifampiaro… ? Eo koa ny tena fototry ny demokrasia dia ny fahalalahana amin’ny fanehoan-kevitra, ny fanajana ny zon’olombelona ; fitanana, fisamborana olona tsy ara-dalàna, fampiasan-kery amin’ny famotorana, famonoana olona tsy mandalo fitsarana,…
Etsy ankilan’ireo koa ny tokony hisian’ny mangarahara eo amin’ny fitantana ny harena, ny volam-bahoaka… Ny farany, nefa tsy ny kely indrindra, ny ady amin’ny kolikoly. Ity no tena manamaimbo ny mpitondra fanjakana amin’ny ankapobeny, ka mahabe resaka ; ahoana, aiza, iza avy izao no mba efa voasambotra sy migadra tamin’ireo « trondro vaventy », voatonontonona ho mpanao kolikoly, mpanondrana an-tsokosoko ny harem-pirenena (andramena, volamena, sokatra…) ? Aiza ho aiza ny halatra sy fanodikodinam-bolam-panjakana tao amin’ny Jirama… ? Raha mbola tsy ahitam-baliny ireo, fandaniana andro, resaka ambony latabatra sy any an-dapa ihany izany hoe « fanjakana tsara tantana » izany.